dhibcood Import iyo dhalin model ah dhul digital in file CAD a
Inkasta oo aan ka walaacsanahay dhamaadka layli sidan oo kale waa in ay curiyaan qaybaha iskutallaabta ay weheliyaan stroke dhidibka ah, xisaabi Muga goynta, qararka, ama profiles isla, fiiri qaybta this jiilka of model dhul digital ka marka loo dhoofiyo dhibcood, sidaa ...
layliyo sahan isticmaalaya AutoCAD iyo Total Station CivilCAD
Tani waa mid ka mid ah Casharrada ugu fiicnaa ee aan aragnay, gaar ahaan dadka isticmaala rajaynaya in CivilCAD joogtada sahan in ay qaataan Civil3D tallaabooyin badan oo dheeraad ah iyo kakanaanta. dokumenti ayaa la dhisay oo goglan tahay inay webka by Engineer ah Manuel Zamarripa Medina, kuwaas oo qaar badan oo maqsuud doonaa rabitaankooda in ay ...
Baridda CAD / GIS, GPS / Qalabka, topografia
Abuuri karo qaybaha iskutallaabta CivilCAD
Iyadoo this article waxaan soo dhaweynaynaa wajiga cusub oo uu leeyahay goobta rasmiga ah CivilCAD, saaxiibada ARQCOM shaqo weyn kulmaan maalin ka 15 sano 20,000 ka badan dadka isticmaala ee Latin America. In ay qaybta cusub "Casharrada" ay ku jirtay shaqo xiiso leh oo ay ku jiraan talaabo macquul ah. ...
Dhalinta faahfaahinta waxay Dhagri CivilCAD
Barnaamijyada yaryar waxay sidaan sameeyaan, ugu yaraan iyada oo ay fududahay in macaamiishu ay qabato, waxa aanu rajeyneyno, guud ahaan, waa warbixinta sirqoolka, xayiraadda, jadwalka jadwalka iyo masaafada, xuduudaha iyo isticmaalka. Aan aragno sida aan u sameyno CivilCAD, iyada oo la adeegsanayo AutoCAD inkastoo ay sidoo kale la shaqeyso Bricscad taas oo jaban iyo ...
Abuur alignments in CivilCAD
Qoraalkaygii hore ayaa sharaxaad ka bixiyey Sharciga (CivilCAD), oo ah codsi aad u macquul ah oo loogu talagalay AutoCAD iyo Bricscad. Hadda waxaan rabaa in aan sii wado jimicsiga marwalba marxaladdeena hore ee Tifaftirka leh Wadarta Gawaarida, oo ka shaqeynaya isku xirnaanta qaabka dhijitaalka ah. Xaaladda CivilCAD, tan waxaa loo yaqaan 'axis mashruuc', inkastoo tan iyo tan ...
Contours AutoCAD - From Data Total Station
Sida loo abuuro khadadka mawjada ah ee horay loo soo dejiyey barnaamijyada kale. Xaaladdan, waxaan doonayaa in aan sameeyo iyada oo barnaamijka ah ee tababarka mid i tusay mid ka mid ah farsameyaalkayga ugu fiican; kuwaas oo uu ogaa laakiin taas oo xiiso yar ay isaga dhigtay waqtiyadii dhowaa. Waxaan soo koobayaa qaybta hore sababta oo ah waxay ka dhigeysaa ...
AutoCAD-AutoDesk, Featured, GPS / Qalabka, topografia
Toddobaadkan ayaa maalin aad u guulaystay, Waxaan ku barayay kooras ah AutoCAD dadka isticmaala MicroStation, sida muuqaalka guud ee dhulka wadaan koorsada aan siiyey dhowr maalmood ka hor la isticmaalayo CivilCAD in ay curiyaan khadadka model iyo dusha digital. Sababta ugu weyn ee aan u sameynay waa sababta oo ah inkastoo ...
AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley